အဖွဈမြားတဲ့ ရငျသားကငျဆာ - OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Jul 3, 2018
ရင်သားကင်ဆာဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖြစ်များတဲ့ ကင်ဆာတစ်မျိုး ဖြစ်သလို ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာလည်း အတွေ့ရများတဲ့ ကင်ဆာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာဟာ ကင်ဆာတို့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုပြီးအတွေ့ရများပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ အသက်ငယ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ လုံးဝ မဖြစ်တော့ဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး … အသက်ငယ်တဲ့သူတွေမှာ အလုံးအကျိတ် ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကင်ဆာထက် ကင်ဆာမဟုတ်သော အလုံးအကျိတ်တွေ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများတယ်လို့သာ ဆိုလိုပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်တာတွေ အတွေ့ရများတဲ့ အတွက် အမျိုးသားတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာ မဖြစ်ဘူးလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်တွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရင်သားဆဲလ်တွေ တစ်ရှူးတွေဟာ အမျိုးသားတွေမှာလည်း ရှိတဲ့အတွက် ယောက်ျားတွေမှာလည်း ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ရင်လည်း အမျိုးသမီးတွေကို ကုသရတာထက် ပိုပြီး ကုသရခက်ခဲတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ရာသီစပေါ်တာစောတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ အသက်အရွယ်ကြီးမှ ရာသီသွေးဆုံးသူတွေ၊ သားသမီး မွေးတာ နို့တိုက်တာ နည်းသူတွေ၊ Oestrogen ဟော်မုန်းသောက်ခဲ့ဖူးသူတွေ (ဝက်ခြံအတွက် ပေးတဲ့ တစ်ချို့သောဆေးတွေ ၊ တစ်ချို့သော သားဆက်ြခားဆေးတွေ) ၊ ဝတဲ့သူတွေ နဲ့ မိသားစုမှာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ခဲ့ဖူးရင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေဟာ မဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပိုပြီးတော့ များပါတယ်။
ဒီတော့ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေနဲ့ လာမလဲ
အများစုကတော့ အလုံးအကျိတ် အနေနဲ့ စဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ စမ်းမိရင်မာနေတဲ့ အလုံးအကျိတ်မျိုး မဟုတ်ဘဲ ပြည်ဖုဖြစ်သလိုမျိုး ခပ်ပျော့ပျော့ အလုံးအကျိတ် အနေနဲ့လည်း လာတတ်ပါတယ်။
ရင်သားပေါ်မှာ ဒါမှမဟုတ် နို့သီးခေါင်းမှာ အနာဖြစ်ပြီးတော့လည်း လာနိုင်ပါတယ်။
နို့သီးခေါင်းကနေ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သွေး ၊ အရည်ကြည်တွေ ထွက်တာ ၊ နို့ ထွက်ရမယ့် အခြေအနေ အသက်အရွယ်မျိုး မဟုတ်ဘဲ နို့ထွက်လာတာ စသဖြင့်လည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သာမန်ကြည့်ရုံနဲ့ ကင်ဆာဟုတ်မဟုတ် အတိအကျပြောဖို့ ခက်ခဲတဲ့အတွက် အထူးသဖြင့် ဖြစ်တာကြာပြီဆိုရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ သွားပြီးတိုင်ပင်ရပါမယ်။
ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တယ်လို့ သံသဃရှိတဲ့ အခါမှာ အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်ပြီး ရင်သားဓါတ်မှန် ဒါမှမဟုတ် ရင်သား ultrasound ရိုက်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေမှ အသားစယူပြီး စစ်ဆေးပါတယ်။ အသားစအဖြေကနေ ရင်သားကင်ဆာ ဟုတ်မဟုတ်ကို အတိအကျပြောလို့ရပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာဖြစ်သွားရင် ဘယ်လိုကုသသလဲ ပျောက်ကင်းနိုင်ချေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ???
ရင်သားကင်ဆာဟာ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေထိ မပျံ့နှံ့သေးဖူးဆိုရင် ခွဲစိတ်ကုသနည်းနဲ့ ကုသတာ အဓိက များပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးရင် ရင်သားနားက ဒါမှမဟုတ် ချိုင်းကြားက ပြန်ရည်ကျိတ်တွေထိ ပျံ့နှံ့နေနိုင်တဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုပါ ရှင်းထုတ်ဖုိ့အတွက် လိုအပ်သလောက် ဓါတ်ကင်တာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးပျံ့နှံ့နေပြီဆိုရင်တော့ အပြီးခွဲစိတ်ကုသတာထက် ရောဂါလက္ခဏာသက်သာအောင် အဓိကထား ကုသပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကင်ဆာဆေးပညာထွန်းကားလာတဲ့ အတွက် လူနာပေါ်မူတည်ပြီး ကင်ဆာကုသရာမှာ အထောက်အကူပေးတဲ့ ဟော်မုန်းဆေးတွေကိုပါ တွဲပေးလာကြပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ရင်သားကင်ဆာဟာ တစ်ခြားသောကိုယ်တွင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ကင်ဆာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပျောက်ကင်းနိုင်ချေ များပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် စောစောသိရလေ့ရှိလို့ပါပဲ။ ကင်ဆာကို စောစောစီးစီးကုသရင် ပျောက်နိုင်ချေများတဲ့ အတွက် သံသဃရှိတဲ့အခါ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
မိသားစုမျိုးရိုးမှာကင်ဆာဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်မှာ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ???
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်တုန်းက ဟောလိဝုဒ်က နာမည်ကြီးရုပ်ရှင် မင်းသမီး Jolie ရင်သားဖြတ်လိုက်တဲ့ သတင်းကြားကြပါလိမ့်မယ်။ သူဖြတ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်မှာကို ကြိုတင်ကာကွယ်ချင်တဲ့ အတွက်ပါပဲ။
တစ်ချို့သော ရင်သားကင်ဆာတွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇမှာ ပါလာတဲ့ Gene တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ဒီထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံး Gene ကတော့ BRCA Gene တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမျိုးရိုးဗီဇ Gene ပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာတော့ မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ယောက်မှာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် ဒီ Gene ရှိမရှိကို တစ်ခြားမိသားစုဝင်တွေမှာပါ လိုက်ရှာလေ့ရှိပါတယ်။ ရှိရင်လည်း ဒီ Gene ပါလို့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အင်္ဂါတွေကို ကြိုထုတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ လိုအပ်ရင်စောင့်ကြည့်နေတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီလိုမျိုး Gene အထိရှာဖွေကုသနိုင်ဖို့က ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။ ကဲ ဒီနေ့တော့ ရင်သားကင်ဆာအကြောင်းကို အတော်များများ ပြောပြပေးသွားပါတယ်။ ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကငျဆာ ရောဂါကို ဖွဈစနေိုငျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြက အန်တရာယျရှိတဲ့…
ရငျသားကငျဆာဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အဖွဈမြားတဲ့ ကငျဆာတဈမြိုး ဖွဈသလို ကြှနျမတို့နိုငျငံမှာလညျး အတှရေ့မြားတဲ့ ကငျဆာတဈမြိုး ဖွဈပါတယျ။ ရငျသားကငျဆာဟာ ကငျဆာတို့ ထုံးစံအတိုငျးပဲ အသကျကွီးတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော ပိုပွီးအတှရေ့မြားပါတယျ။ ဒီလိုပွောလို့ အသကျငယျတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော လုံးဝ မဖွဈတော့ဘူးလို့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး … အသကျငယျတဲ့သူတှမှော အလုံးအကြိတျ ဖွဈခဲ့တယျဆိုရငျ ကငျဆာထကျ ကငျဆာမဟုတျသော အလုံးအကြိတျတှေ ဖွဈနိုငျခပြေိုမြားတယျလို့သာ ဆိုလိုပါတယျ။
ရငျသားကငျဆာဟာ အမြိုးသမီးတှမှော ဖွဈတာတှေ အတှရေ့မြားတဲ့ အတှကျ အမြိုးသားတှမှော ရငျသားကငျဆာ မဖွဈဘူးလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ ရငျသားကငျဆာဆဲလျတှေ ဖွဈတတျတဲ့ ရငျသားဆဲလျတှေ တဈရှူးတှဟော အမြိုးသားတှမှောလညျး ရှိတဲ့အတှကျ ယောကျြားတှမှောလညျး ရငျသားကငျဆာဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဖွဈရငျလညျး အမြိုးသမီးတှကေို ကုသရတာထကျ ပိုပွီး ကုသရခကျခဲတတျပါတယျ။
နောကျတဈခုက ရာသီစပျေါတာစောတဲ့အမြိုးသမီးတှေ၊ အသကျအရှယျကွီးမှ ရာသီသှေးဆုံးသူတှေ၊ သားသမီး မှေးတာ နို့တိုကျတာ နညျးသူတှေ၊ Oestrogen ဟျောမုနျးသောကျခဲ့ဖူးသူတှေ (ဝကျခွံအတှကျ ပေးတဲ့ တဈခြို့သောဆေးတှေ ၊ တဈခြို့သော သားဆွကျခားဆေးတှေ) ၊ ဝတဲ့သူတှေ နဲ့ မိသားစုမှာ ရငျသားကငျဆာဖွဈခဲ့ဖူးရငျ ရငျသားကငျဆာဖွဈနိုငျခဟြော မဖွဈတဲ့သူတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ပိုပွီးတော့ မြားပါတယျ။
ဒီတော့ ရငျသားကငျဆာဖွဈရငျ ဘယျလို လက်ခဏာတှနေဲ့ လာမလဲ
အမြားစုကတော့ အလုံးအကြိတျ အနနေဲ့ စဖွဈတတျပါတယျ။ တဈခါတဈရံ စမျးမိရငျမာနတေဲ့ အလုံးအကြိတျမြိုး မဟုတျဘဲ ပွညျဖုဖွဈသလိုမြိုး ခပျပြော့ပြော့ အလုံးအကြိတျ အနနေဲ့လညျး လာတတျပါတယျ။
ရငျသားပျေါမှာ ဒါမှမဟုတျ နို့သီးခေါငျးမှာ အနာဖွဈပွီးတော့လညျး လာနိုငျပါတယျ။
နို့သီးခေါငျးကနေ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ သှေး ၊ အရညျကွညျတှေ ထှကျတာ ၊ နို့ ထှကျရမယျ့ အခွအေနေ အသကျအရှယျမြိုး မဟုတျဘဲ နို့ထှကျလာတာ စသဖွငျ့လညျး တှရေ့တတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီလိုမြိုးတှဖွေဈခဲ့တယျဆိုရငျ သာမနျကွညျ့ရုံနဲ့ ကငျဆာဟုတျမဟုတျ အတိအကပြွောဖို့ ခကျခဲတဲ့အတှကျ အထူးသဖွငျ့ ဖွဈတာကွာပွီဆိုရငျ ကြှမျးကငျြတဲ့ သကျဆိုငျရာဆရာဝနျနဲ့ သှားပွီးတိုငျပငျရပါမယျ။
ရငျသားကငျဆာဖွဈတယျလို့ သံသဃရှိတဲ့ အခါမှာ အသကျအရှယျပျေါ မူတညျပွီး ရငျသားဓါတျမှနျ ဒါမှမဟုတျ ရငျသား ultrasound ရိုကျခိုငျးလရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီကနမှေ အသားစယူပွီး စဈဆေးပါတယျ။ အသားစအဖွကေနေ ရငျသားကငျဆာ ဟုတျမဟုတျကို အတိအကပြွောလို့ရပါတယျ။
ရငျသားကငျဆာဖွဈသှားရငျ ဘယျလိုကုသသလဲ ပြောကျကငျးနိုငျခြေ ဘယျလောကျရှိသလဲ???
ရငျသားကငျဆာဟာ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါတှထေိ မပြံ့နှံ့သေးဖူးဆိုရငျ ခှဲစိတျကုသနညျးနဲ့ ကုသတာ အဓိက မြားပါတယျ။ ခှဲစိတျကုသပွီးရငျ ရငျသားနားက ဒါမှမဟုတျ ခြိုငျးကွားက ပွနျရညျကြိတျတှထေိ ပြံ့နှံ့နနေိုငျတဲ့ ကငျဆာဆဲလျတှကေိုပါ ရှငျးထုတျဖုိ့အတှကျ လိုအပျသလောကျ ဓါတျကငျတာတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။ တဈကိုယျလုံးပြံ့နှံ့နပွေီဆိုရငျတော့ အပွီးခှဲစိတျကုသတာထကျ ရောဂါလက်ခဏာသကျသာအောငျ အဓိကထား ကုသပေးလေ့ ရှိပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာတော့ ကငျဆာဆေးပညာထှနျးကားလာတဲ့ အတှကျ လူနာပျေါမူတညျပွီး ကငျဆာကုသရာမှာ အထောကျအကူပေးတဲ့ ဟျောမုနျးဆေးတှကေိုပါ တှဲပေးလာကွပါတယျ။ ယဘေူယအြားဖွငျ့ ရငျသားကငျဆာဟာ တဈခွားသောကိုယျတှငျးမှာဖွဈတတျတဲ့ ကငျဆာတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ပြောကျကငျးနိုငျခြေ မြားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ စောစောသိရလရှေိ့လို့ပါပဲ။ ကငျဆာကို စောစောစီးစီးကုသရငျ ပြောကျနိုငျခမြေားတဲ့ အတှကျ သံသဃရှိတဲ့အခါ ဆရာဝနျဆီ သှားပွဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။
မိသားစုမြိုးရိုးမှာကငျဆာဖွဈခဲ့ရငျ ကိုယျ့မှာ ဖွဈလာနိုငျခရြှေိတယျဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ???
လှနျခဲ့တဲ့ တဈနှဈ နှဈနှဈလောကျတုနျးက ဟောလိဝုဒျက နာမညျကွီးရုပျရှငျ မငျးသမီး Jolie ရငျသားဖွတျလိုကျတဲ့ သတငျးကွားကွပါလိမျ့မယျ။ သူဖွတျလိုကျတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ ရငျသားကငျဆာဖွဈမှာကို ကွိုတငျကာကှယျခငျြတဲ့ အတှကျပါပဲ။
တဈခြို့သော ရငျသားကငျဆာတှဟော မြိုးရိုးဗီဇမှာ ပါလာတဲ့ Gene တှကွေောငျ့ ဖွဈရတာပါ။ ဒီထဲမှာ နာမညျအကွီးဆုံး Gene ကတော့ BRCA Gene တှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီမြိုးရိုးဗီဇ Gene ပါလာခဲ့တယျဆိုရငျ ကိုယျ့မှာရငျသားကငျဆာ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နိုငျငံခွားမှာတော့ မိသားစုဝငျ တဈယောကျယောကျမှာ ရငျသားကငျဆာဖွဈခဲ့လို့ရှိရငျ ဒီ Gene ရှိမရှိကို တဈခွားမိသားစုဝငျတှမှောပါ လိုကျရှာလရှေိ့ပါတယျ။ ရှိရငျလညျး ဒီ Gene ပါလို့ ကငျဆာဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့ အင်ျဂါတှကေို ကွိုထုတျထားလရှေိ့ပါတယျ။ လိုအပျရငျစောငျ့ကွညျ့နတောမြိုးလညျး ရှိတတျပါတယျ။
ကြှနျမတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ ဒီလိုမြိုး Gene အထိရှာဖှကေုသနိုငျဖို့က ခကျခဲနပေါသေးတယျ။ ကဲ ဒီနတေ့ော့ ရငျသားကငျဆာအကွောငျးကို အတျောမြားမြား ပွောပွပေးသှားပါတယျ။ ကနြေပျကွလိမျ့မယျလို့လညျး မြှျောလငျ့ပါတယျ။